Ka anyi niile kwado GNU MediaGoblin! | Site na Linux
mgbochi | | GNU / Linux, Ndị ọzọ
Fewbọchị ole na ole gara aga, nchịkọta ego maka ọrụ ọhụrụ malitere, GNU MediaGoblin.
Abali abuo rue mgbe mkpọsa ha mechiri, ha ewepụtara ihe karịrị $ 30,000 n’ime 60,000 ha na-arịọ. Ihe oru ngo a choro nkwado nke ndi nile puru ịga n'ihu.
Mana tupu m gaa n’ihu ịrịọ gị ka ị nye onyinye ego n’akpa gị, achọrọ m ịkwụsị ntakịrị ma kọwaa ihe kpatara o jiri dị m mkpa na ọrụ a na-eto.
1 Mgbasa ozi na-abara anyị niile uru
2 Kedu ihe m ga-emeri?
Mgbasa ozi na-abara anyị niile uru
GNU MediaGoblin bụ oru ngo lekwasịrị anya na mgbasa nke ọdịnaya nke ọtụtụ ọdịnaya, dị ka foto, vidiyo na ụda. Ihe oru ngo nke sitere na mbido choro iji dochie YouTube, DeviantArt, Flickr na ndi ozo gha enwe oke ochicho ka ha buru eziokwu, ma n'ezie MediaGoblin agagh enwe ike inagide onodu nke mmepe nke bu n'ezie.
Otú ọ dị, ọrụ ahụ na-ekwe nkwa. Ozugbo ha nwetara ego dị mkpa; akụkụ kachasị sie ike na nke kachasị mkpa nke oru ahụ ga-amalite: gọọmentị. Yabụ, ndị nwere usoro nkeonwe ga-enwe ike ịmekọrịta ndị anyị debara aha ha n'akwụkwọ ọha na eze. Ma olee otú nke ahụ si enyere anyị aka?
Ọtụtụ ga-eche na ụzọ ndị ọzọ dị ugbu a zuru oke maka ojiji ọ bụla anyị chọrọ inye ha. Flickr ewepụla ọtụtụ maka ndị na-ese foto na-eji ya, ma ndị ọkachamara na ndị na-ewere ya dị ka ihe ntụrụndụ, DeviantArt bụ ebe mgbaba nke ọtụtụ ndị nwere nka dijitalụ, nwere ọtụtụ isiokwu, ngwa ngwa na ogologo ndepụta nke ịhazi. Vimeo na-eme nke ọma dị ka ihe ngosi maka mkpụmkpụ na vidiyo nwere ụfọdụ ikuku nka.
Ka anyị were ihe atụ na-esonụ. Bụ foto. Dị ka ọtụtụ ndị ọzọ, ịchọrọ ịtọ saịtị nke gị ịkwalite ọrụ gị. Maka obu oru gi na ichoro ka uwa hu ya. Ma imepụta saịtị nke gị na-ewepu gị n'obodo ndị guzobere. Ngwọta? Mepụta MediaGoblin nke gị, nke ga - enye gị ụfọdụ elele.
Ọ dị ọnụ ala. Site na obere ndidi na enyemaka sitere na obodo ị nwere ike wụnye na sava na nke ahụ bụ ya. Gaghị akwụ onye ọ bụla ụgwọ ka ọ bụrụ ebe nrụọrụ Flash naanị gị nwere ike iji.
Nwere ike ịgbanwe ya ka ọ masị gị. N'ezie, GNU MediaGoblin bụ sọftụwia na - akwụghị ụgwọ, dị n'okpuru AGPL. N'ezie, enweelarị ọtụtụ Nkwụnye ins nke na-enye ohere ịkwado ụdị 3D. Dị ka nke a ma ọ bụ karịa mgbanwe? Ọ na-akwado isiokwu sitere na mbido. Ime otu maka ihe atụ gị ga-adị egwu ma nweela ndị mere ya.
Ọ na-enye gị uru ndị ọzọ. Ọ tinyeworị usoro ịza ajụjụ nke na-akwado Markdown, EXIM metadata, Atom syndication, ikikere mgbanwe na nnakọta. A na-eji ya eme ihe taa.
N'ezie, njirimara ole na ole na-efu efu; dị ka nsuso onye ọrụ, mmụba dị ukwuu na nkọwa, API na ndị ọzọ; Kedu Ha nọ n'ụzọ ma ọ bụ nke ahụ ga-ekwe omume site na ndọtị ma ọ ga-abụ na anyị nwere ya mgbe gọọmenti etiti rutere. Anyị ga-ekwu oge ụfọdụ na 2013 gbasara GNU MediaGoblin 1.0 dị njikere iji weghaara ịntanetị niile.
Ma ọdịnihu a dị mma agaghị enwe ike na-enweghị enyemaka. Bọchị abụọ fọdụrụ. Amaara m na ọ dịghị onye nwere ego iji chekwaa nakwa na ọtụtụ n'ime anyị enweghị ike inye onyinye maka ihe ọ bụla kpatara ya, mana ọ dịkarịa ala achọrọ m ime obere m. Ọ bụrụ na ọ bụ naanị otu onye na-agụ akwụkwọ a nyere onyinye, agam emezu ebum n’uche m. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị, nye onyinye. Ma ọ bụrụ na ọ bụghị, ọ dịkarịa ala nyere aka gbasaa ozi.
Kedu ihe m ga-emeri?
Anyị rutere n'oge na onye ọ bụla tụrụ anya: ụgwọ ọrụ! Kedu ihe kpatara mkpọsa nke crowdfunding ọ ga - ezu ma enweghị obere onyinye ọrụ ahụ. Offọdụ ihe ị nwere ike imeri bụ:
Hugmakụ ọfụma maka naanị 15 USD. Mmakụ!
Un eme nkwado maka naanị 35 USD. Echere m na ọ ga-abụ ihe dị ka "Nke a otutu atụmatụ e mere omume site na enyemaka gị" n'ime oru ngo nke Git.
A mpempe akwụkwọ ozi maka 50 USD.
Uwe maka ihe ọ bụla karịa 100 USD.
Malite na $ 1000, ị ga-amalite ịnata ọnụ ọgụgụ Gavroche, mascot oru ahụ. Maka $ 1000, ị nwetara ya nke ọma, nke dị ọhụrụ site na ngwa nbipute 3D. Maka $ 2000, nke onye ndu ọrụ ahụ sere, Chris Webber.
Naanị $ 7500, Chris Webber ga-esi nri abalị gị. Ga-aga Wisconsin. Okwesiri ikwuputa na ị nwere ike iweta onye otu na nri abalị ahụ ga-abụ anụ anaghị eri anụ, n'agbanyeghị na ị ga-ahọrọ vegan. Ahịa!
Ndị na-ahụ maka ego na-arụ ọrụ bụ ndị FSF na-agba ọsọ, yabụ na ị ga-akwụnye onyinye abụọ maka ọnụ ahịa otu. Webber kọwara (na Bekee) n'ihi na FSF na-eme ya crowdfunding ma ọ bụghị Kickstarter ma ọ bụ ọrụ ọ bụla ọzọ, nke enwere ike ichikota dị ka eziokwu ahụ bụ na FSF tụkwasịrị obi na ọrụ ahụ nke ukwuu ma na ha nwere ikike ịnwe mkpọsa nke dabara maka mkpa ha.
Ya mere You mara. Ọ bụrụ na ha nwere ego ole ma ha nwere otu ụzọ ha si akwụ ụgwọ; ọ bụ naanị ịnwa obi gị ntakịrị ma nye dollar ole na ole na ọrụ nke ga-adị ezigbo mkpa n'ọdịnihu. Nye, biko.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Ka anyi niile kwado GNU MediaGoblin!
Nchịkọta kwalite asụsụ xD
Nwee afọ ojuju nke ịkwado ọrụ nke na-elekwasị anya na ịntanetị obere ebe ka mma. N'ihi ya, m ghọtara amakụ.
Ee, a ga m enye dọla 8000 n’ebughị ụzọ chọọ nri abalị, mana enweghị m ha.
Nwepu aka na-abara anyị uru karịa ihe niile n’ihi na ọ na-egbochi otu ụlọ ọrụ inwe njikwa n’ihe niile edepụtara. Nke ahụ na-ebelata ohere nke mgbochi, ọrụ ọrụ, wdg. Ọ na - eme ka ọ dịrị gị mfe ịnweta data gị. Ọ bụrụ na m ga-ahapụ ihe m ebe m na-anaghị achịkwa, ọ dịkarịa ala.
O yiri m nnukwu ọrụ na-atọ m ụtọ. Aga m enye onyinye.
Otu esi rụọ ọrụ / gbanyụọ ihe mmetụ ahụ site na njedebe